Aplus Global Ecommerce Amụma Nzuzo Gụọ Nke a
Ọrụ ịrịọ Amazon
Mkpegharị Nkwado Amazon
Mgbochi Nkwado Nkwado Amazon
Nnyocha Ahụike Akaụntụ
Nkwalite Ahịa nke Ndị na-ere Amazon
Ejila nlezianya mee iwu nzuzo maka ndị chọrọ ịma otu esi eji "Ozi Nkeonwe" ha n'ịntanetị. A na-eji ozi nkeonwe iji chọpụta, kọntaktị, chọta, ma ọ bụ iji mata onye ọ bụla metụtara ọnọdụ a.
Biko gụọ iwu nzuzo anyị iji ghọta otu anyị si anakọta data, jiri ya, chebe ma ọ bụ jikwaa dịka ọ bụla weebụsaịtị anyị.
Ozi nkeonwe nke anyị chịkọtara n'oge nleta blog ma ọ bụ weebụsaịtị
Mgbe ndebanye aha na akwụkwọ nyocha jupụta, anyị na-anakọta ozi ndị a: Aha Onye Ọbịa, Adreesị Email, Nọmba Ekwentị (Nhọrọ), na nkọwa ndị ọzọ dabere na ọrụ a kwadoro.
Kedu ka anyị si anakọta ozi?
Anyị na-anakọta ozi ndị ọbịa n'oge ụdị akwụkwọ ndụmọdụ, Live Chat, ma ọ bụ ndebanye aha na saịtị anyị.
Kedu ka anyị si eji ozi anakọtara?
Anyị nwere ike iji ozi anakọtara n'ụzọ ndị a:
Iji hazie ahụmịhe gị na ịnye ụdị ọdịnaya na ngwaahịa ịchọrọ ịmasị ma ọ bụ masị gị n'ọdịnihu.
Nye ọrụ ka mma na nzaghachi nye ajụjụ gị ma ọ bụ arịrịọ gị.
Iji hazie azụmahịa gị.
Maka ọkwa na nyocha nke ọrụ ma ọ bụ ngwaahịa anyị na-enye.
Iji soro tupu mmekorita (nkata ndụ, email, ma ọ bụ ajụjụ ekwentị)
Olee otú anyị chebe gị ozi?
Anyị anaghị eji nyocha onyunyo na / ma ọ bụ nyochaa ụkpụrụ PCI.
Naanị anyị na-enye akụkọ na ozi ma jụọ maka nọmba kaadị kredit gị.
Ozi nkeonwe gị nkekọrịta gị nọ n'azụ netwọkụ echedoro ma naanị ndị nwere ohere pụrụ iche na data ahụ ga-enweta ya. Achọrọ ka anyị debe data gị anakọtara. Ọzọkwa, ozi dị nro ị nyere na-ezoro ezo site na iji SSL (Secnọ ná Ntụkwasị Obi Socket Layer).
Anyị na-ewere usoro niile oge ọ bụla ị banyere, nyefee, nweta ozi ọ bụla iji hụ na nchekwa kachasị.
A na-ahazi azụmahịa niile site na onye na-enye ọnụ ụzọ ámá ma anaghị echekwa ma ọ bụ hazie na sava anyị.
A na-akwụ ụgwọ niile site na iji ọnụ ụzọ ịkwụ ụgwọ ma anyị enweghị ike ma ọ bụ bu n'obi chekwaa data ahụ na sava anyị.
Anyị na-eji 'kuki'?
Anyị na-arịọ gị ikike tupu ịnakọta kuki. Nwere ike ịhọrọ ma ọ bụ ịnabata ma ọ bụ gbanyụọ kuki niile.
Anyị na-arịọ maka kuki iji nweta ahụmịhe ahaziri iche. Site na ịgbanye kuki ụfọdụ atụmatụ nke weebụsaịtị nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ mana ị ka nwere ike itinye iwu.
Nkwupụta nke atọ
Anyị anaghị ere ma ọ bụ zụọ ahịa, ma ọ bụ nyefee onye ọ bụla ọzọ na ndị ọzọ ma ọ bụrụ na ọrụ a akwadoro chọrọ ya.
Njikọ nke atọ
Anyị anaghị enye ụdị ụdị ọrụ ọ bụla nke atọ.
Enwere ike ichikota ozi Mgbasa ozi Google site na Googlekpụrụ Mgbasa Ozi Google. Edebere ha iji nye ahụmịhe dị mma maka ndị ọrụ. Lelee Ebe a.
Anyị emejuputala ihe ndị a:
Nyochaa na Google AdSense
Ngosipụta Google gosipụta Mgbasa Ozi
Mmetụta ọgụgụ na Mmasị na-ekwu
Anyị na ndị na-ere ahịa ndị ọzọ, dị ka Google na-eji kuki ndị ọzọ (dị ka kuki Google Analytics) na kuki ndị ọzọ (dị ka kuki DoubleClick) ma ọ bụ ihe nchọpụta ndị ọzọ ndị ọzọ iji kpokọta data gbasara mmekọrịta onye ọrụ na ngosi mgbasa ozi na ọrụ ọrụ mgbasa ozi ndị ọzọ dịka ha si emetụta weebụsaịtị anyị.
Anyị na ndị na-ere ahịa ndị ọzọ na-eji kuki ndị ọzọ (maka nyocha) na kuki ndị ọzọ (DoubleClick Kuki) ma ọ bụ ihe nchọpụta ndị ọzọ ndị ọzọ iji chịkọta data maka mmetụta mgbasa ozi na ọrụ ndị ọzọ metụtara weebụsaịtị anyị.
Usoro Nzuzo anyị gụnyere okwu 'Nzuzo' ma ọ nwere ike ịchọta ya na peeji nke dị n'elu.
Ndị ọrụ ga-enweta ọkwa banyere mgbanwe mgbanwe nzuzo:
Na Amụma Nzuzo anyị
Ndị ọrụ nwere ike ịgbanwe ozi nkeonwe ha:
Site na iziga anyị
Anyị na-anakọta adreesị email gị na:
Iji zipu ozi, nzaghachi ajụjụ, na / ma ọ bụ arịrịọ ma ọ bụ ajụjụ ndị ọzọ.
Nhazi nke iwu, izipu ozi, na mmelite metụtara iji.
Anyị na-ejikwa ya iji zitere gị ozi ndị ọzọ metụtara ọrụ a kwenyere na ya.
Zụọ ọrụ kachasị ọhụrụ anyị na-enye ndị ahịa anyị mgbe azụmahịa mbụ mere.
Ọ bụrụ na oge ọ bụla ịchọrọ iwepu aha na email anyị n'ọdịnihu wee zitere anyị email na info@aplusglobalecommerce.com na anyị ga-ewepụ gị niile ga-eme n'ọdịnihu akwụkwọ ozi.
Ọ bụrụ na enwere ajụjụ gbasara iwu nzuzo a, ị nwere ike ịkpọtụrụ anyị site na iji ozi dị n'okpuru.
Mkparịta ụka ndụ: https://aplusglobalecommerce.com/
ekwentị: + 1 775-737-0087
Biko chere oge 8-12 maka Ndị Ọrụ Ndị Ahịa anyị iji bịakwute gị na nsogbu ahụ.
642 N Highland Ave, Los Angeles,
+ 1 775-737-0087
bara uru Links
Okwu & Ọnọdụ
Nyochaa Akaụntụ Akaụntụ
Ikike niile echekwabara
Nwebiisinka © 2021 AplusGlobalEcommerce
Nkata na ọkachamara anyị
Ka anyị kwuo okwu ....
Ndewo, olee otu m ga-esi nyere gi aka?